Snapchat, maka ndị ahụ na-aghọtabeghị ihe Snapchat bụ | Gam akporosis
E nwere ụfọdụ ngwa ndị na- metụtara ndị na-eto eto na-ege ntị na mgbe ụfọdụ a na-aghọtaghị ihe kpatara eji ya n’afọ ụfọdụ dị iche iche. O doro anya na ọtụtụ ndị echeela ihe mere o ji nwee ihe ịga nke ọma. N'ezie otu n'ime azịza ya bụ na ọ bụ nke mbụ nyere izipu ihe oyiyi nwere oge a kapịrị ọnụ ka ha wee pụọ ma ọ bụ bibie onwe ha. Ejiri ọtụtụ ngwa na ọrụ ndị ọzọ depụtaghachiri akụkụ a, ọ dịkwa ole na ole ndị malitere anwa ya ịnye ihe ọzọ na Snapchat n'onwe ya.
Ma, ebe Snapchat dị iche na ngwa ndị ọzọ n'ihi afọ ndụ ya. Ọ bụghị na anyị enweghị ike ịnwale ma wụnye ya, mana ọ nwere interface nke doro anya maka nwata maka etu esi eme ya mgbagwoju anya, mgbe ndị okenye anyị na-eji ọkọlọtọ na ngwa ahụ. Ihe dị iche a sitere na mbụ na mmetụ pụrụ iche nke mere ka ọ bụrụ otu n'ime ngwa kachasị ebudatara na ọtụtụ ndị na-eto eto na-ege ntị hụrụ n'anya nke nwere ya dị ka otu n'ime ọkacha mmasị. Mgbe ụfọdụ ọ ka mma ịghara ịghọta ihe kpatara ya ma hapụ ya na nke ahụ, n'agbanyeghị agbanyeghị, anyị ga-ekwu okwu banyere ihe Snapchat bụ na ihe na - eme ka ọ dị iche na ngwa ndị ọzọ.
1 Ngwa ndi umuaka na amuru n’anya
2 Kedu ihe dị iche na ndị ọzọ dị ka Instagram?
Ngwa ndi umuaka na amuru n’anya
Ka anyị gaa n'ihu na-echeta, anyị bụ ndị meworo okenye, na mgbe anyị na ezinụlọ anyị gara ezumike, anyị nwere ihe nkịtị iji were igwefoto weghara ihe ndị ga-ahapụ oge ndị ahụ maka ụmụ. Igwefoto duru nna anyị baara anyị mba ma gwa anyị kpachara anya mgbe ị na-eji yaE wezụga ịmara otu esi ejikwa ya manyere gị iji akwụkwọ ntuziaka were foto kacha mma.
Ka anyị ghara ikwu ihe ọ bụla gbasara ịmepụta foto na njedebe nke njide anyị nwere ike ime, ebe ọ bụ na ọ dịghị ka ugbu a, ebee okwu na-enweghị njedebe na-ada ụda n'ụzọ nkịtị na ọnụ ọgụgụ anyị nwere ike inweta site na oghere igwefoto nke ekwentị anyị. Ugbua afọ ole na ole karịa, anyị nwere igwefoto anyị mana anyị ga-emepe foto ndị ahụ, yabụ ewere nke ọ bụla n'ime ha dị ka ihe dị oke ọnụ ahịa ma nwee uru mmụọ, yana n'otu oge akụ na ụba.
Anyị na-aga ozugbo na ihe Snapchat bụ ma chọpụta na ihe nlereanya ahụ, nke foto ọ bụụrụ anyị oge niile, gbanwere kpamkpam. Lee ya ebe a oge na-aga nke ahụ nwere ike ime na ndụ anyị ma yabụ anyị ga-ewepu akara ngosi na ọ ga-abụ oge icheta. Ha abụghị foto anyị ga-edebe na akpati nke ncheta, mana ha ga-abụ akụkụ nke stampụ e biri ebi nke ga-apụ n'anya n'ime ụbọchị ma ọ bụ nkeji, yabụ atụmatụ nke inwe ike ihichapụ foto na-akpaghị aka abụwo otu n'ime isi ya àgwà.
Kedu ihe dị iche na ndị ọzọ dị ka Instagram?
Instagram na-anọgide dị ka ngwa maka debe oge ndị ahụ na akpati ncheta ma mee ka ndi anyi metara ma obu ezin’ulo anyi. Na - ewe obere oge na ndụ gị, tinye nzacha, tinye okwu ma nwee olile anya na ndị ọzọ ga - eleba anya na ịkọ foto ahụ pụtara ma ọ bụ nwee mmasị na ihe kpatara ya
Snapchat dị anya na Instagram n'ihi na ọ dị ka ọ dị, dị ka ndụ n'onwe ya na enweghị nzacha. Foto ndị a na - eme ka ha pụta, ị nwere ike ịkekọrịta na nwa gị nwanyị n'oge ahụ ị na - ehi ụra na ị jidere gị na mgbochi okporo ụzọ, na - enweghị ihe ọ bụla karịa nke a. Enweghị uru ọ bara ma ọ bụ maka ebe nchekwa.
Ọ bụ ngwa ahụ kuziere ibi na oge a nke anyị nọ ma na-eje ozi iji gosipụta mmetụta nke mmetụta uche, ahụmịhe ma ọ bụ otu ihe ahụ na-eme iji soro ndị ọzọ kerịta ha. Maka ebumnuche ndị ọzọ anyị nwere ngwa ndị ọzọ dịka Instagram ma ọ bụ Facebook n'onwe ya, mana iji weghara oge ndị ahụ anyị na ndị enyi, ezinụlọ ma ọ bụ ndị ọrụ ibe anyị na-eme, ọ bụ Snapchat ebe ọ hụrụ ebe ya na ihe mere ndị na-eto eto ji enwe ya dịka ọkacha mmasị , n'agbanyeghị na ọ ka na-esiri anyị ike ịghọta ihe kpatara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Kedu ihe bụ Snapchat na ihe dị iche na ngwa ndị ọzọ